Progressive Voice Myanmar » New Report: Devolved Federal Governance Crucial to Protect Sustainable Customary Land Tenure Systems in Burma
Home Resources Press Releases New Report: Devolved Federal Governance Crucial to Protect Sustainable...
July 5th, 2016 • Author: Ethnic Community Development Forum •2minute read
The report provides unique insight into the intricate structuring of seven customary land management systems in six ethnic states, which have enabled communities to protect and sustain local livelihoods and resources for generations.
‘Local communities have their own detailed rules and regulations that promote self-reliant livelihoods and provide stronger environmental protection than the national laws,’ says Kamoon, the lead researcher from ECDF. ‘Decision-making on all major issues related to land is made by consensus in village meetings.’
Investment and premature integration into the centralized national system are threatening existing ethnic land tenure systems, especially following the signing of bilateral ceasefires between ethnic armed groups and the government over the past five years. The government has been promoting individual land titling, which is undermining traditional communal systems.
‘My village has managed itself asastrong community for ten generations,’ says Paw Moe from Daw Tarklare village in Karenni State. ‘Our lands are communally managed, to protect our farms, forests and water. Now the government is trying to impose individual land titles, so we are worried that businessmen will come in and try to buy lands and divide our community.’
Drawing on international experiences, the report gives practical suggestions about how customary land systems could be integrated withafuture national land governance system. It also calls on the government to imposeamoratorium on acquisition of customary lands until peace accords, federal constitutional amendments and new land legislation have been formalized.
The report is the result ofatwo-year joint effort between ECDF and communities practicing these systems in six ethnic states. Household surveys were carried out with over 1,200 families on customary land management systems in over 26 townships.
The ECDF, set up in 2004, isacoalition of seven community development organizations working in Burma’s ethnic states.
Mi Ka Moon 09401601822 (English, Burmese, and Mon)
Paw Moe 09252975309 (Karenni and Burmese)
U Saung Pawng 09440979862 (Kachin and Burmese)
Sai Khur Hseng 09264362973 (English, Burmese, Shan and Thai)
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်
အစီရင်ခံစာသစ်။ ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေရှည်တည်တန့်သည့် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာ ပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်ကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ပေါ်ထွန်းလာမှုအပေါ်များစွာ မူတည်နေသည်။
ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာ အစီရင်ခံစာသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ် မှမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအားတောင်းဆိုလိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းမြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကျင့်သုံးမှုစနစ်ကို အကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသည့် တရားဝင်မူဘောင်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ် အတွင်းသို့ထည့်သွင်းသွားရေးတို့ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် (၆)ခု အတွင်းရှိ လူထုရပ်ရွာ (၇) ရွာက ကျင့်သုံးသော ထူးခြားနက်နဲလှသည့်ရိုးရာဓလေထုံးတမ်းမြေယာ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့၏ ရပ်ရွာလူနေထိုင်မှုဘ၀ ရေရှည်ရပ်တည်သွားရေးနှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အရင်းအမြစ်များ ရေရှည်တည်တံ့စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့်စနစ်တကျ ရိုးရာစီမံမှုများအားဤအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
“ဒေသခံလူထုများဟာ ၄င်းတို့ရဲ့လူနေမှုဘ၀ဖူလုံရေးနဲ့ စိမ်းလန်းတည်တန့်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ၄င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ရပ်ရွာစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ် ၄င်းတို့ရပ်ရွာစည်းမျဉ်းဥပဒေ တွေဟာ အမျိုးသားအဆင့်ဥပဒေထက် သူတို့ရွာအတွက်ပိုသင့်လျှော်တယ်” ဟု ECDF သုတေသနအသင်းကို ဦးဆောင်သည့် မိခမွန်း ကပြောပါသည်။
“မြေယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ချိန်မှာ ရပ်ရွာအစည်းအဝေး သဘောတူညီချက်ကနေဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်” ဟု မိခမွန်း ကဆက်ပြောပါသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအားအဓိကထားသော အမျိုးသားအဆင့်စနစ်တွင် ထည့်သွင်းသည့် ရင်းနှီးမြူပ်နှံမှု စီမံကိန်းများသည် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာကျင့်သုံးနေသော ရပ်ရွာများကို ထိခိုက်နှောက်ယှက် နေပါသည်။ များသောအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်သာကာလကစပြီး အစိုးရစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးခြင်းအပါအ၀င် အစိုးရ၏တသီးပုဂ္ဂလ မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းတို့သည့် ရိုးရာဘုံမြေစနစ်ကိုထိခိုက်ဖျက်စီးစေပါသည်။
“ကျွန်မရွာက ကိုယ့်စည်းမျဉ်းဥပဒေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ရွာလူထုဖြင့် အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ မျိုးရိုး (၁၀) သက်ကျော်ခဲ့ပြီ” ဟုကရင်နီပြည်နယ် ဒေါတကလဲရွာသူ ဖောမိုး ကပြောပါသည်။ “ကျွန်မတို့ရွာ မြေ၊ သစ်တောနဲ့ရေတွေကို စုပေါင်း စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်နဲ့အသုံးပြုတယ် ဒါပေမဲ့ အခု အစိုးရက တသီးပုဂ္ဂလမြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ် အဲဒါကျွန်မတို့အတွက် စိုးရိမ်မှုတခုဖြစ်ရပါတယ် ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရက လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ၀င်လာတာပဲ မြေကိုဈေးကစားပြီးဝယ်တယ် ရပ်ရွာလူထုကို အခြမ်းခြမ်းကွဲအောင်ခွဲတယ်” ဟုဖောမိုး ကဆက်ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းစနစ် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုသည် အမျိုးသားဥပဒေနှင့် လိုက်လျှောညီထွေစွာသဟဇာတဖြစ်အောင် ထည့်သွင်းကျင့်သုံးခြင်းအား နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ ထို့ပြင်ကျွန်ပ်တို့ တောင်းဆိုလိုသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက် မရမချင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင် ဆင်သေးသရွေ့ကာလ နှင့် မြေယာဥပဒေအသစ် မပြင်ဆင်သေးသမျှကာလတွင်ရိုးရာမြေယာများသိမ်းယူခြင်း မပြုစေရန် တို့ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာသည် ပြည်နယ် (၆) ပြည်နယ်တွင်းရှိ ရွာ (၇) ရွာနေ ဓလေ့ထုံးတမ်းကျင့်သုံးနေသော ဒေသခံရွာလူထုများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး (၂) နှစ်ကာလအတွင်း ကြိုးစားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ ရိုးရာဓလေ့စီမံခန့််ခွဲမှု ကျင့်သုံးနေသော မြို့နယ်ပေါင်း (၂၆) မြို့နေ မိသားစုပေါင်း (၁၂၀၀) စုတို့ ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ရရှိလာသည့် အစီရင်ခံစာ ဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆုံရပ်သည် ရပ်ရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့စည်း(၇) ဖွဲ့ဖြင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရန် – ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ
(၁) မိခမွန်း ၀၉၄၀၁၆-၁၈၂၂
(၂) ဖောမိုး ၀၉၂၅၂၉၇၅၃၀၉
(၃) ဦးဆောင်ဘောမ် ၀၉၄၄၀၉၇၉၈၆၂